Imbali emfutshane yelizwe laseMorocco
Kwixesha lase-Classical Antiquity, iMorocco yafumana amaza ahlaseli kwakuquka amaFenike, amaCarthagini, amaRoma, amaVandals kunye namaByzantine, kodwa ngokufika kwamaSilamsi , iMorocco yaba namazwe azimeleyo ahlala ehlaselayo.
Ngama-702 amaBerbers ayengenise kwimikhosi yama-Islam kwaye amkela i-Islam. Amazwe okuqala aseMorocco awakhiwa kule minyaka, kodwa abaninzi babesoloko belawulwa ngabangaphandle, abanye babo babeyingxenye yoMlawuli waseMayyad owawulawula amaninzi kumntla Afrika c.
700 CE. Ngo-1056, ubukhosi baseBerber, kodwa, ngaphantsi kwe- Almoravid Dynasty , kunye neminyaka emakhulu mahlanu amahlanu, iMorocco yayilawulwa yi-Berber dynasties: i-Almoravids (ukusuka ku-1056), i-Almohads (ukusuka ngo-1174), iMarinid (ukusuka ngo-1296) kunye ne-Wattasid (ukususela ngo-1465).
Kwakuyimizuzu yama-Almoravid kunye ne-Almohad apho iMorokota yayilawula ezininzi zeMntla Afrika, iSpeyin, nePortugal. Ngo-1238, i-Almohad yalahlekelwa ngumgaqo weSilamsi weSpeyin nePortugal, eyaziwa ngokuba ngu-Andalus. Inkosi yaseMarinid yazama ukuyibuyisela kwakhona, kodwa ayizange iphumelele.
Ukuvuselelwa kweMandla kaMorocco
Phakathi ne-1500s, kwavela kwakhona umbuso onamandla eMorocco, ngaphantsi kobunkokheli bobukhosi bukaSadi obubethabathe uMzantsi Morocco ngasekuqaleni kwe-1500s. USadidi washayisa i-Wattasid ngo-1554, waza waphumelela ekuthintela ukuqhutyelwa kweentetho zombini yamaPutukezi nama-Ottoman Empire. Ngomnyaka we-1603 umpikiswano olandelelanayo okhokelela kwithuba lembambano elingazange liphele ngowe-1671 kunye nokwakhiwa kweDynasty yase-Awalite, eqhubeka ilawula iMorocco kuze kube namhlanje.
Ngexesha loxinzelelo, iPortugal yaphinde yafumana indawo eMorocco kodwa iphinda iphonswe ngaphandle kweenkokheli ezintsha.
Ngomnyaka we-1800, ngelixa iMpembelelo yobukhosi base-Ottoman yayiyehla, iFransi neSpeyin yaqala ukuthatha umdla kuMorocco. I-Algeciras Conference (1906) eyayilandela iNkcenkcesho yokuqala yaseMorocco, inxaxheba ekhethekileyo eFransi kwimimandla (ichasene neJamani), kunye neSivumelwano seFez (1912) senza iMorocco ibe ngumkhuseli waseFransi.
ISpeyin yafumana igunya phezu kwe-Ifni (ngasezantsi) kunye neTetouan ukuya ngasentla.
Ngama-1920 iRif Berbers yaseMorocco, phantsi kolawulo lukaMuhammad el-Krim, yavukela igunya lesiFrentshi neSpanishi. Iifutshane zahlala iRif republic yachithwa ngumsebenzi ohlangeneyo waseFransi / waseSpain ngowe-1926.
Ngowe-1953 iFransi yayisusa inkokeli yesizwe kunye no-sultan Mohammed V ibn Yusuf, kodwa amabini amazwe kunye nenkolo ayebiza ukuba abuyisele. UFransi waphunyezwa, kunye no-Mohammed V babuyela ngo-1955. Ngomhla we-2 Matshi 1956 isiFratshi yaseMorocco yafumana ukuzimela. I-Maroc yaseMorocco, ngaphandle kweenkampu ezimbini zeCeuta neMelilla, zathola ukuzimela ngo-Apreli 1956.
U-Muhammad V waphumelela ngunyana wakhe, uHasan II ibn Mohammed, ekufeni kwakhe ngo-1961. UMorocco waba ngumlawuli womgaqo-siseko ngo-1977. Xa uHassan II wafa ngo-1999 waphumelela ngunyana wakhe oneminyaka engamashumi amathathu nantlanu ubudala, u-Mohammed VI ibn al- Hassan.
Ingxabano kwi-Western Sahara
Xa iSpain isuka eSahara yaseSpain ngo-1976, iMorocco yathi inkokeli enyakatho. Izabelo zaseSpeyin ezantsi, ezaziwa njenge- Western Sahara , zazimele zizimeleyo, kodwa iMorocco yahlala kuloo ndawo kwi-March Matshi. Ekuqaleni, iMorocco yahlula intsimi eMauritania, kodwa xa iMauritania iholele ngo-1979, iMorocco yathi yonke.
Ubume bemihlaba yinkxalabo enzulu, kunye namaqela amaninzi ngamazwe afana neZizwe eziManyeneyo azibona njengendawo engeyiyo yolawulo, i-Sahrawi Arab Republic yeDemocratic Republic.
Ukuhlaziywa nokunyuswa ngu-Angela Thompsell
UClancy-Smith, uJulia Anne, eNtshona Afrika, amaSilamsi kunye nehlabathi leMeditera: ukusuka kwi-Almoravids ukuya kwiMfazwe yase-Algeria . (2001).
"Imvelaphi ye-MINURSO," uMbutho weZizwe eziManyeneyo kwi-Referendum e-Western Sahara. (Ukufikelela ngo-18 Juni 2015).
Imbali emfutshane yeKenya
Izicwangciso zeSifundo seZifundo ze ESL eziphezulu
Igalari yeSithombe seMarvel Comics IAvengers